सहज छैन शीर्ष नेतालाई, कस्तो छ प्रदेश ४ को अवस्था ?
Wednesday, 15 Nov, 2017 7:58 AM
२९ कात्तिक ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बनिसकेका, पटकपटक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका, बारम्बार मन्त्री भएका, युवा नेतादेखि डन को समेत पहिचना बनाएका उम्मेदवार प्रदेश न. ४ का जिल्लाम चुनावी मैदानमा छन् । उनै चर्चित उम्मेदवारका कारण यी जिल्लाको निर्वाचन परिणामप्रति धेरैको चासो छ ।
लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका हेभीवेट नेताको आरजितको आलन अहिले धेरैतिर चलिरहेको छ । माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिको संयोजनगरेका डा. बाबुराम भट्राई र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण गोरखा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ ।
दुवै नेता चर्चित भएका कारण उनीहरुमध्ये कसले जित्ने भन्ने अनुमान गर्न सहज छैन । त्यस्तै तनहुँ कांग्रृसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका कारण चर्चामा छ । पटकपटक प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनिसकेका पौडेलका लागि पाटृिको आन्तरिक गुटबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ ।
युवा नतो रवीन्द्र अधिकारीका कारण कास्कीले थोरै भए पनि चर्चा बटुलेको छ । नागरिकमा खबर छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्धारा राजीना दिन अस्वीकार
यस्तो छ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी
बाढी प्रभावित डेढ वर्षदेखि अनुदान र राहातको प्रतिक्षामा
तीन राप्रपाबीच तत्काल एकता किन हुन सकेन ?
लण्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट मुद्धालाई लिएर आफुले पदबाट राजीनामा दिन अस्विकार गरेकी छन् । ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेसँगै उत्पन्न विवादपछि राजनीतिक बृत्तमा राजीनामाको चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्री मेले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी हुन् ।